Home Wararka Farmaajo: “Maraykanka ayaa nagu qasbay in aan heshiis la galno Kenya”
Madaxweyne Farmaajo oo xalay kula kulmay magalaada Nairobi ee dalka Kenya qaar ka mida ganacsato ka soo jeedo beesha uu ka dhashay ayaa u sheegay in culays badan la saaray isaga iyo dowladiisa kaas oo ka imaanayay dalka Maraykanka.
Farmaajo ayaa sheegay in isaga ka go’nayd in uu ku adkeeysto dacwada badda in maxkamad lagu xaliyo laakiin hada waxa uu qaatay go’aanka ah in si wadahal ah lagu xaliyo muranka badda ee u dhaxeeya labada dal. Farmaajo oo ay ka muuqato walwal iyo dhibatada ka dhalan karta go’aanka uu kula heshiinayo dalka Kenya ayaa yiri “.. aniga mowqifkeyga waad ogeedeeyn laakiin hadda Dowlada Maraykanka ayaa nagu qasabtay in aan heshiis la galno dalka Kenya si loo dajiyo xaalada colaada siyaasadeed ee u dhaxeeysa labada dal”.
Farmaajo ayaa ku daray “ Maraykanka waxa uu balan qaaday inuu awoodiisa isugu gayn doono in si farsamaysan oo aan kicinaynin shacuurta shacabka Soomaaliyeed lagu xalin doono dacwada Badda”.
Inkastaa oo uusan si toos ah u sheegin hadana Farmaajo ayaa muujiyay in ay jiraan waxyaabo ama fursado siyaasadeed oo uu ku badashay heshiiska uu la galay dowlada Kenya.
Mid ka mida Siyasiyiinta ku dhaw madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa idaacada Capital FM ee laga dhagaysto magalaada Nairobi ayaa sheegay saakay in isafgaranwaagii u dhaxeeyey labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ee arimaha Badda xal waaro laga gaarayo dhawaan.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay, Farmaajo ayaa codsaday in dhankiisa loo ogolaado in uu inkiro in uu heshiis la galay dowlada Kenya, gaar ahaan sadax bilood ee soo socoto si aan fursad loo siin mucaaradka dowladiisa oo soo badanayo xiligaan kala guurka ah. Dhanka kale dowlada Kenya ayaa dhankeeda xadidi doonta ka hadalka dacwada Badda ee warbaahinta iyo siyaasiyiinta dalka Kenya.
Farmaajo iyo kooxaha la shaqaysto ayaa dhankooda la filayaa in maalmaha soo socda ay warbaahinta Soomaalida ka inkiraan in heshiis qarsoodi ah lala galay hogaanka dalka Kenya. Labada dhinac ayaa magacaabay gudi howshaan kala shaqeeya safiirada dalalka Maraykanka iyo Qatar u fadhiya dalka Kenya. Wali lama oga magacyada gudiga dalka Soomaaliya ku matalaya wadahadalka labada dhinac.
Farmaajo oo og heshiiska qarsoodiga ah ee uu la gali doono dalka Kenya ayaa horay u soo kaxeeystay Wasiiru Dowlaha Wasaraada Arimaha Dibadda ee Soomaaliya Cabdulkadir Axmed-Kheir Cabdi kaas oo ehel la ah Fahad Yasin. Farmaajo ayaa ka soo tagay wasiiradii kale ee aqoonta u lahaa arimaha badda si aan marnaba loo ogaanin qorshahiisa gaarka u ah isaga. Wasiiru dowladaha oo airinta badda kala hadlay dad ay saaxiibo yihiin ayaa yiri “ .. walaaloow Maraykanka ayaa arintaan wato mana is hortaagi karno si kastaa oo aan sameeyno, Dacwadii baddana maxkamad ma aadayso ee waxa ay ku dhamaanaysaa wadahadal taas ayaana danta dowlada ku jirtaa…”.
Xasan Kheyre ayaa kulumo uu la leeyahay shirkadaha Shidaalka ee ku sugan dalka Faransiska waxa uu ugu bishaareeyay in dacwadii badda wadahadal ku dhamaanayso oo maxkamada laga soo wareejin doono, Kenya ayaan is hor istaagi doonin heshiisyada Dowlada Fedaraaalka ay la galayso shirkadaha shidkaalka ee danaynayo in ay shidaal ka qodaan badda Soomaaliya.
Waxa muuqta in xiriir ka dhaxeeyo shirarka ka socda Magaalada Paris ee dalka Faransiska ee uu wado Xasan Kheyre in kan Farmaajo ka wado Magaalada Nairobi.
Dhanka kale mucaraadka dowlada Soomaaliya oo ay ahayd in ay ka soo horjeestaan kana hadlaan heshiiskaan qarsoodiga ah ayaa dhamaantood waxa xarun u ah magalaada Nairobi sidaas darteed, ma jiri doonaan mucaarad si toos ah uga hadli doono heshiiska qarsoodiga ah ee dhex maraya labada dhinac. Waxa iyadana aan jirin Baarlamaan Soomaaliyeed oo difaacaya danaha dadka iyo dalka kana hor imaankaro beeciinta lagu sameeynayo hantida iyo Kheyraadka dalka Soomaaliya.